MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: မုသားမပါတဲ့ အဖြေလိုချင်တယ် - အပိုင်း (၁)
စဉ်းစားကြည့်ရအောင်၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်လို့ ပြောနေကြတယ်၊ တကယ်ကော အဲ့ဒီလိုမျိုး ဖြစ်နေလို့လား? ပြည်ထောင်စု ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို ကျနော်တို့ တကယ်ကော သဘောပေါက်ပါသလား? ပြီးတော့ တန်းတူ အခွင့်အရေးလို့ ပြောတယ်၊ ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ်တိုင်းရင်းသားတွေက တန်းတူ အခွင့် အရေး ရဖူးလို့လဲ၊ တကယ်တော့ကွာ ကျနော်သိတဲ့ တန်းတူ အခွင့်အရေးဆိုတာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ။ မင်းငိုရင် ကျနော်လည်း ငိုမယ်၊ မင်းပျော်ရင် ကျနော်လည်း အတူတူ ပျော်မယ်၊ မင်းအခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရင် ငါကူညီမယ်၊ ငါတွေ့ကြုံနေရင် မင်းက ကူညီမယ် ဒီလိုပါပဲ။
အခုကြတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး၊ ရှင်းရှင်း ပဲပြောမယ်၊ စစ်တပ်ထဲမှာပဲကြည့် တိုင်းရင်းသားတွေဆိုရင် ရာထူး မတိုး၊ မတက်တော့ဘူး၊ ပြီးတော့ ခရစ်ယာန် ဆိုရင် ရာထူးမတက်တော့ဘူး၊ ဒါတွေလား ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်၊ တန်းတူအခွင့်အရေး ဆိုတာ၊ တိုင်းရင်းသား တိုင်းရင်းသား လို့ပြောရင် ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စသည်တို့ကိုပဲ တန်း မြင်ကြတယ်၊ ဗမာကော တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဘူးလား၊ ပြီးတော့ ကျန်တဲ့ ပလောင်၊ ပအို့ဝ် စသည် စသည် တို့ကော တိုင်းရင်းသားတွေ မဟုတ်ဘူးလား။
တကယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသာ အသက်ရှင် ရှိနေအုံးမယ်ဆိုရင် ကျနော် မေးချင် ပါတယ်။ သူကကော တိုင်းရင်းသားတွေကို တကယ်စစ်မှန်တဲ့ တန်းတူအခွင့် အရေး ပေးချင်သလား? အခု လက်ရှိ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း မေးချင်ပါတယ်၊ အခု တကယ် သူမရဲ့ စိတ်ရင်းထဲမှာကော တိုင်းရင်းသားတွေကို တန်းတူအခွင့်အရေး ဆိုတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အရာကို ပေးချင်သလား? ရစေချင်သလား? ဒီမေးခွန်းဟာ ရိုးရိုးလေးပေမယ့် တကယ် မုသားမပါပဲ ဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ ခက်ခဲတဲ့ မေးခွန်း တခု ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ရိုးသားပါ၊ ဖြူစင်ပါလို့ သွန်သင်ကြတယ်။ ဒီစကားလုံးတွေဟာ ရိုးရှင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တကယ့် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် (စား) ကြီးတွေက လိုက်နာကျင့်သုံးပါသလား? ဘယ်လိုက်နာကျင့်သုံးမှာလဲ..၊ ပြည်သူတွေကို လိမ်တယ်၊ ညာတယ်၊ တကယ်ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို မည်းသိုးနေတဲ့ မုသားကြီးတွေကို သုံးပြီး လှည့်စားတယ်၊ လိမ်ညာခဲ့တယ် အခုထိပါပဲ။ အဲ့ဒါတွေကြောင့် အခု ဘယ်လူမျိူးစု၊ ဘယ်တိုင်းရင်းသားမှ သူတို့ (စစ်အစိုးရ) ကို အယုံကြီးယုံတော့မှာလဲ..? ဒါဟာ ကိုယ်စိုက်တဲ့ အတိုင်း ကိုယ် ပြန်ရိပ်ရတာပဲ။
စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ..၊ လူ့လောကကြီးထဲမှာ နေတဲ့ ခဏသာ အတွင်းမှာ အရိုးသားဆုံး မဟုတ်ရင်တောင်မှ မှန်ကန်စွာ နေထိုင်မယ်၊ အချင်းချင်း မကူညီရင်တောင်မှ ဒုက္ဒခ မပေးဘူး ဆိုရင် ဘယ်လောက် ပျော်စရာ ကောင်းမလဲ။ လောဘအိုးကြီး စစ်အာဏာရှင် အစိုးရတွေကြောင့် ပြည်သူလူထု ဆင်းရဲ ဒုက္ဒခတွေနဲ့ တွေ့ကြုံနေရတာ ရင်မောတယ်။ အဲ့ဒီလောက်လည်း လောဘကြီးစရာ မလိုပါဘူး၊ ကိုယ်သေသွားရင် ဘာမှ ယူသွားလို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီ သင်ခန်းစာ၊ စံနမူနာကို ဦးပေါ်ဦးလည်း ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ စစ်အာဏာရိုးတွေရဲ့၊ အချိန်တွေ မနှောင်းသေးပါဘူး။ ငရဲမှာတောင် ဟော အ၀ီစိအောက်ထိ ရောက်မယ့်ကောင်တွေလို့ မြင်နေမိပါတယ်။
at 9/21/2012 07:46:00 PM